Izindaba - Ungayikhetha kanjani insimbi yokugunda utshani？
Izici zemishini yokugunda utshani umsebenzi ophansi, ukusebenza okulula, namandla okusika aqinile wezinto ezidinga ukusikwa, ikakhulukazi utshani, futhi zilungele izindawo ezinotshani ezithela kakhulu namapaki amakhulu. Umshini wokugunda utshani usika utshani ngokunyakaza okuhlobene nokugunda kommese ohambayo kanye nommese ohleliwe kusika. Kubonakala ngokusika kahle izinhlanga namandla aphansi adingekayo, kepha inokuguquguquka okuncane emadlelweni futhi kulula ukuvimba. Ifanele izindawo ezinotshani eziyizicaba nezendalo. Nokusebenza kotshani bokuzenzela. Ukukhiqizwa nokusetshenziswa kwemishini yokugunda utshani ojikelezayo kwaqala maphakathi nawo-1980. Thembela endlebeni ekhanda lokusika elijikeleza ngesivinini esikhulu ukusika ifolishi. Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, amandla okusebenza emikhiqizo esanda kuthuthukiswa yokugunda utshani iye yathuthukiswa kakhulu, futhi ijubane selithuthukiswe kakhulu, konga isikhathi sokusebenza sabasebenzi bokhula ukonga nabantu abaningi. Namuhla ngizokwethulela ikakhulukazi ukuthi ungayikhetha kanjani ifayili le-insimbi yomshini wokugunda utshani.
Intambo yomshini wokugaya amagiya iyi- ama-multi-blade mower blade, futhi irimothi yi-2-blade mower blade. Umgomo wokusebenza uyefana. Zonke zingumshini wokugunda utshani ojikeleza ngesivinini esikhulu. Ngokwethiyori, insimbi yokugunda utshani emise okwegiya Ukuphepha kuqinisekile, umucu omude ubukhali, futhi indawo yokumboza nayo ngandlela thile. Ukuqina kwensimbi yokugunda utshani kuhlobene ne-izinto zensimbi yokugunda utshani, hhayi isimo.
Eqinisweni, ukukhetha izindwani zokugunda utshani kubaluleke kakhulu. Ungakhetha izinsimbi ezihambelana nomshini wokugunda utshani ngezikhathi ezahlukahlukene. Umshini wokugunda utshani ojikelezayo unezinhlobo ezahlukahlukene zamashini wokugunda otshani wommese ojikelezayo ukuthola imiphumela emihle ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene zotshani. Ukuze kube nomphumela omuhle wephethini, imimese ejikelezayo enamaphiko aphezulu, aphakathi nendawo, namaphiko aphansi kufanele ingezwe ngokuya ngezimpawu zenkantolo ekugcineni ukuthola izimfanelo ezahlukahlukene zokusika. Uma udinga ukusika utshani, ungakhetha umshini wokugunda utshani onamandla wamazinyo amaningi. Lo mshini wokugunda utshani ungagaya utshani bese ushiya ube izingcezu ezinhle kakhulu ngaphandle kokuthinta ukubukeka.
Multi-izinyo Blade (Gator Blade)
UZhengchida unikezela ngamabhande afanelekile ku- Amafektri e-OEM Garden bladekanye nezimakethe ezingemuva ezinjengezitolo, abathengisi bezitolo ezinkulu, izitolo ezinkulu nezinkampani ezisebenza ngama-lawncare. Ngemuva kokuthuthuka okuqhubekayo kweminyaka ecishe ibe ngu-20, iZhengchida inebanga lomkhiqizo elibanzi futhi eligcwalisiwe lamakhasi engadi. I-Zhengchida manje inamamodeli ahlukene angaphezu kuka-2000 e-blade mower blade ahlanganisa cishe wonke amamodeli akhona emakethe.